भारतले सोचे जति सहयोग गरेन : प्रधानमन्त्री ओली - Aarthiknews
भारतले सोचे जति सहयोग गरेन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ। गम्भीर राजनीतिका सङ्कट र कोरोना महामारीबाट मुलुक गुज्रिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले अपेक्षा गरे जति भारतले सहयोग नगरेको बताएका छन्। बीबीसी हिन्दीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
बीबीसी हिन्दीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिएको अन्तर्वार्तामा उनले भारतबाट पाइरहेको सहयोग र सो मुलुकसँगको हालको सम्बन्धको बारेमा कुरा गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि सन्देश पठाए। उनले यो पनि भने कि उनले चीनबाट सहयोग लिएका छन्।
बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित उनको कुराकानीको अंशहरू :
कोरोना महामारीको बेला, नेपालले धेरै गाह्रो समय भोग्यो। के तपाईँले सोचे जस्तो भारतबाट सहयोग प्राप्त गर्नुभयो ?
उत्तर: ठिक छ, म केही नकारात्मक भन्न चाहन्न। अझै, यो अदालतको निर्णय वा खोपको अभावका कारण वा भारतमा व्याप्त लहरको कारण हुन सक्छ। किनभने भारत आफैँमा समस्या भएको थियो।
तर हामी सोच्छौँ तर जति सहयोग भारतबाट हुनुपर्थ्यो त्यो…एक छिमेकीले…यति धेरै सहयोग पाउनु पर्छ कि यो भारतको हितको लागि पनि हुन्छ। भारत एक छिमेकी हो र जसको सम्बन्ध यति जोडिएको छ कि यदि भारतमा कोभिड नियन्त्रण भयो र यो नेपालमा छैन भने त्यसले भारतमा नियन्त्रण हुनुमा कुनै फरक पर्दैन। त्यो त्यता पनि सङ्क्रमण हुन्छ।
यदि हामीले सिमाना सिल गर्‍यौँ भने पनि यस्तो हुँदैन किनकि स्थानीय व्यक्तिको दुवै पक्षमा आफन्तहरू छन्। तिनीहरू यति धेरै छिमेकमा बस्छन् कि उनीहरूको बस्ने र बसोबास गर्ने सबै सँगै हुन्छन्। त्यहाँ यस्तो सम्बन्ध छ कि रोके पनि हामी रोक्न सक्षम हुनेछैनौँ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि के सन्देश छ ?
उत्तर: म प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाललाई अन्य देशहरूभन्दा थोरै फरक रूपमा हेर्न अनुरोध गर्दछु। हामी छिमेकीहरू हौँ। हाम्रो सिमाना खुला छ र त्यहाँ आवागमन छ। यदि दुई देश बिच पर्वतहरू थिए भने यो सीमा खुला भए पनि आउन र जान गाह्रो हुने थियो। तर त्यहाँ दुवै तिर खेत छ। एउटा घर सिमानाको यस पट्टि छ र एउटा घर सीमाको अर्को पट्टि छ। यहाँका मानिसहरू सबै चीजको लागि आउनु जानु पर्छ। त्यसैले यी सबै चीजहरूलाई दिमागमा पनि राख्नुहोस्। हामीसँग मैत्री सम्बन्ध छ, यसलाई दिमागमा राख्नुहोस्।
भारतले हामीलाई पूर्ण सहयोग गर्नु आवश्यक छ। मैले भनेको छैन कि भारतले सहयोग गरिरहेको छैन। हामी भारतबाट धेरै तरल अक्सिजनहरू ल्याइरहेका छौँ। भारतले समर्थन गरिरहेको छ। म भारतलाई धन्यवाद दिन्छु कि यसले पहिले हामीलाई खोप दियो।
के चीनले अब नेपालमा बढी प्रभाव पार्छ किनभने कोरोना महामारीको बेला चीनले तपाईँलाई थप सहयोग गरिरहेको छ ?
उत्तर: बिचमा राजनीति ल्याउन आवश्यक छैन। यसमा कसैको प्रभावको कुनै कुरा छैन। भारतले खोप दिन्छ, चीनले दिन्छ, अमेरिकाले दिन्छ, बेलायतले दिन्छ। यो भ्याक्सिनको कुरा हो, राजनीतिको कुरा होइन। त्यसैले यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन। र, हामी दुवै छिमेकीलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनकि एकले हामीलाई १८ लाख र अर्कोले २० लाख डोज खोप दिए। दुबैबाट सहयोग आउँदै छ। चिकित्सा उपकरण दुबैबाट उपलब्ध छ। त्यसैले दुवै देशलाई धन्यवाद।
प्रश्न: विगत छ वर्षको अवधिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तपाईँ बिच केही मनमुटाब भएको छ। नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध आजको दिनमा कस्तो छ ?
उत्तर: एक, म विश्वास गर्छु कि हामी छिमेकीहरू हौँ, त्यसैले त्यहाँ समस्याहरू छन्। समस्याहरू किन खडा हुन्छन् ? चिली र अर्जेन्टिना मानिससँग न त प्रेम नै न त कुनै घृणा नै छ। आज फेसबुकको युग हो, केही यसो उसो हुन सक्छ, तर यसको सम्भावनाहरू थोरै कम छन्। त्यहाँ कोही कतै जाँदैन र कोही कतै आउँदैन। त्यहाँ न प्रेम छ न त घृणा नै हो। जब त्यहाँ छिमेकमा बसिन्छ त्यहाँ प्रेम हुन्छ र समस्याहरू उठिरहन्छ।
त्यसो भए के प्रेम अब समस्यामा परिणत भएको छ ?
उत्तर: कहिलेकाहीँ बुझाइमा समस्या पनि भएको थियो। अब गलतफहमी वा बुझेको समस्या हटेको छ। त्यसमा हामी अलमलमा पर्नु हुँदैन। हामीले भविष्य हेर्नु पर्छ र अगाडि बढ्नु पर्छ। हामीले नकारात्मक पक्षलाई होइन तर सकारात्मक पक्षहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ।
'तथ्यमा टेकेर बोलौँ, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बेच्दा केही बिग्रँदैन'
बजेट सम्बन्धमा केही भ्रम र यथार्थ